कोरोना अपडेटः विश्वमा ९ लाख ३२ हजारभन्दा बढीको मृत्यु, सङ्क्रमित कति ? - Jagaran News Jagaran News
कोरोना अपडेटः विश्वमा ९ लाख ३२ हजारभन्दा बढीको मृत्यु, सङ्क्रमित कति ?
Published On : 15 September, 2020 1:22 pm
काठमाडौं , भदौ ३० । विश्वभरी कोरोना भाइरस सङ्क्रमणबाट नौ लाख ३२ हजार ७४४ जनाको मृत्यु भएको विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) ले मङ्गलबार जानकारी दिएको छ । सो संगठनका अनुसार विश्वमा २ करोड ९४ लाख ४५ हजार ६८८ जना कोरोना भाइरस सङ्क्रमित भएका छन् । यद्यपि विश्वमा कोरोना भाइरस सङ्क्रमित दुई करोड १२ लाख ७९ हजार ८३३ व्यक्ति कोरोना मुक्त भएका छन् ।